Izogwetshwa intombi 'eyaphoqa' isoka ukuba lizibulale | isiZulu
Izogwetshwa intombi 'eyaphoqa' isoka ukuba lizibulale
Igwetshiwe indoda eyabulala intombi eN Cape
Umsolwa 'wagwaza wabulala intombi wahambisa isidumbu emaphoyiseni'
Ubophise indodana ngemuva kokuyibona ibulala intombi
eMelika - UMichelle Carter ulahlwe yicala lokubulala ngokungenhloso ngesikhathi kuqulwa icala lakhe elithathwa njengelingajwayelekile ngoba umufi wazibulala.
Umufi uConrad Roy, 18, oyisoka lalo wesimame watholakala eshonile ebulewe wushevu we-carbon monoxide ehleli evenini yakhe ngoJulayi 2014.
UCarter, owayeneminyaka engu-17 ngesikhathi sesigameko ozovela enkantolo yezingane eTaunton, lapho ezogwetshwa khona.
OLUNYE UDABA:Kusolwa udlame lwasekhaya ngokuphuma kwezidubmu ezimbili
Ngokwemibiko yabezindaba eMelika, izihlobo zikaRoy zifuna le ntokazi igwetshwe iminyaka engu-20.
Kuvele enkantolo ukuthi lezi zithandani zathumelana inqwaba yemilayezo lapho le ntombi incenga isoka ukuba liqhubeke nezinhlelo zalo zokuzibulala, kodwa afihlele abazali bakhe nokuthi aqambe amanga kumama wakhe.
Ezinye izazi zezomthetho ziyakungabaza ukuthi indima eyadlalwa yile ntombi kulesi simo yanele ukuba angagwetshwelwa leli cala.
Yize kunjalo, iJaji uLawrence Moniz uthe iyona le ntokazi eyayalela isoka ukuba libuyele emotweni futhi nokuthi ayizange iphuthume ixhumane nabosizo lokuqala ngemuva kwalesi sigameko yikona okubaluleke kakhulu okwenze yalahlwa yicala.
Wayezothola u-R60 000 umalume owabulala abashana abane
Cpt: 16-19°C Pta: 16-24°C
Jhb: 12-22°C Bloem: 9-24°C
Dbn: 16-30°C PE: 18-23°C
GIS - 12:04:35 PM Ezinye zasemigwaqeni